विश्वकप छनोटः सिंगापुर ८१ रनमै समेटियो, सन्दिपले बनाए नयाँ कीर्तिमान ! – Everest Dainik – News from Nepal
विश्वकप छनोटः सिंगापुर ८१ रनमै समेटियो, सन्दिपले बनाए नयाँ कीर्तिमान !
२०७५, २६ आश्विन शुक्रबार
काठमाडौं । मलेसियामा जारी आइसिसी विश्व टी-२० एसिया छनोट समूह ‘बी’ अन्तर्गत अन्तिम खेलमा नेपाल र सिंगापुर खेलिरहेका छन् । शुक्रबार दिउँसो १२ः१५ मा भएको खेलमा नेपालले टस जितेर बलिङ गर्ने निर्णय गरेको थियो । ब्याटिङको निम्तो पाएको सिंगापुर १७.३ ओभरमा ८१ रन बनाउँदै अलआउट भएका ।
उसका लागि आज सुरेन्द्रन चन्द्रमोहनले २५ रन बनाउनु बाहेक अन्यले सम्झनलायक प्रदर्शन गर्न सकेनन् । बलिङमा नेपालका सन्दीप लामिछानेले एक्लैले ४ विकेट लिए ।
यस्तै, सोमपाल कामी, करण केसीले समान २ २ विकेट लिए, भने बसन्त रेग्मी र ललित राजवंशीले समान एकएक विकेट लिन सफल भए । नेपालले जवाफी ब्याटिङ केही बेरमा गर्नेछ ।
नेपालले प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा नेपालले असोज १७ मा म्यानमालाई जम्मा १८ बल खेलेर आठ विकेटले पराजित गरेको थियो । दोस्रो खेलमा २० गते मलेसिया, २१ गते थाइल्याण्ड, २३ गते भुटान, २४ गते चीनलाई पराजित गरेको थियो ।
यसअघिका सबै पाँच खेलमा सिङ्गापुर पनि विजयी बन्दै उच्च मनोबलसाथ मैदानमा उत्रदै छ । नेपाल र सिङ्गापुरले समान पाँच खेलबाट १०÷१० अङ्क जोडेका छन् । रनरेटको आधारमा नेपाल अंक तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ ।
नेपालले टी–२० मा सिङ्गापुरविरुद्ध पछिल्लो पटक सन् २०१३ मा खेलेको थियो । एसिसी टी–२० अन्तर्गत कीर्तिपुरस्थित त्रिवि मैदानमा भएको उक्त खेलमा नेपालले १२१ रनको जीत निकालेको थियो ।
गत महिना मलेसियामा भएको ५० ओभरको खेलमा पनि नेपालले सिङ्गापुरलाई ४ विकेटले हराएको थियो । यस छनोटबाट नेपाल र सिङ्गापुरले दोस्रो चरणको छनोट स्थान बनाउँदा अर्को एक टोलीको तय हुन बाँकी छ ।
छनोटबाट शीर्ष तीन टोलीले एशिया छनोटको दोस्रो चरणमा स्थान बनाउने छन् । एशिया छनोटमा सात टोलीले खेल्नेछन् । तेस्रो स्थानका लागि भने मलेसिया र थाइल्याण्डबीचको प्रतिस्पर्धा पछि रहेको छ ।
तेस्रो स्थानको थाइल्याण्डले सबै खेल खेल्दै सात अङ्क जोडेको छ । तर चौंथो स्थानको मलेसियाले आज चीनसँग खेल्दैछ । मलेसियाले चीनलाई पराजित गरेमा दोस्रो चरणमा स्थान बनाउने छ ।
यसअघि एसियाको पश्चिम क्षेत्रीय छनोटबाट युएइ, कतार र कुवेत दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेका छन् । दोस्रो चरणमा युएर्इ, कतार र कुवेतसँगै पूर्व क्षेत्रबाट छनोट हुने तीन टोली गरी छ टोलीबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
छ टोलीबीचको प्रतिस्पर्धाबाट दुई टोली अन्तिम चरणका लागि छनोट हुनेछन् । अन्तिम चरणमा विश्वभरबाट छानिएका १४ टोलीबीच प्रतिस्पर्धा हुने र १४ मध्ये छ टोली टी–२० विश्वकप २०२० का लागि छनोट हुनेछन् ।
नेपाली युवा लेग स्पिनर सन्दिप लामिछानेले नयाँ कीर्तिमान बनाएका छन्। मलेसियामा जारी आइसीसी टी–२० एशिया उपक्षेत्रीय छनोट बी अन्तर्गत नेपालको अन्तिम खेलमा सिंगापुर विरुद्ध ३.३ ओभर बलिङ गरेका लामिछानेले १६ रन खर्चिदै ४ विकेट लिएका हुन् ।
यो सँगै लामिछानेले बसन्त रेग्मी र विनोद दासको एकै प्रतियोगितामा धेरै विकेट लिने रेकर्ड तोडेका हुन् । उमेर समूहमा एकै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालबाट सर्वाधिक विकेट लिने रेकर्ड सन्दिप लामिछानेकै नाममा छ। उनले गत वर्ष जुलाइमा सिंगापुरमा भएको यु-१९ विश्वकप छनोट प्रतियोगितामा ६ खेलमा २४ विकेट लिँदै किर्तिमान बनाएका थिए।
सिनियर टिमको लागि भने एकै प्रतियोगितामा धेरै विकेट (२१) लिने रेकर्ड बसन्त रेग्मी र बिनोद दासको नाममा थियो । रेग्मीले सन् २०१२ को डिभिजन-४ प्रतियोगितामा २१ विकेट लिएका थिए भने बिनोद दासले सन् २००५को एसीसी फास्ट ट्रयाक कन्ट्रीज ९ तीन दिवसीय ० प्रतियोगितामा २१ विकेट लिएका थिए। सन्दिपले शुक्रबार २४ विकेट लिँदै सबै रेकर्ड तोडेका हुन्।
ट्याग्स: Nepal Vs singpur, sandeep lamichhane